Tsy an'asa ve ianao ary mitady asa? Raha eny, dia izao no misy fampiharana Android mahagaga ho anao rehetra antsoina hoe Kormo Job App. Izy io dia fampiharana Android, izay manolotra karazana asa isan-karazany mifandraika amin'ny saha sy ny asanao.
Araka ny fantatrao noho ny toe-javatra misy ny areti-mifindra dia miatrika fatiantoka ny tsena rehetra eran-tany. Noho izany, misy ny tahan'ny tsy fananana asa any amin'ny faritra rehetra, izay ahitana an'i India ihany koa. Firenena an-dalam-pandrosoana i India ary ny tahan'ny tsy fananan'asa dia 3.4% hatramin'ny 3.6% araka ny filazan'ny ILO, talohan'ity toe-javatra misy ny areti-mifindra ity.
Noho izany, mitombo izany noho ny zava-misy ankehitriny. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ny App kormo, izay ahafahanao mangataka asa samihafa mifandraika amin'ny sahanao ary azonao atao koa ny mangataka asa hafa eny an-tsena.
Io no sehatra tsara indrindra ho an'izay mitady asa hamita ny filany. Raha hampiasa ity fampiharana ity ianao, dia manoro hevitra anao izahay hahafantatra momba an'io fampiharana io alohan'ny hampiasana azy. Hizara ny momba an'ity fampiharana ity izahay, izay midika fa afaka mijanona kely miaraka aminay ianao mba hahalalanao momba ity app ity.
Topimaso momba ny Kormo Job App
Google Kormo dia fampiharana Android, izay novolavolain'ny Google LLC. Natomboka tamin'ny 2018 izy io tamin'ny voalohany, saingy manolotra serivisy ho an'i Bangladesh. Taorian'ny fahombiazan'ny fametrahana ity fampiharana ity, Google dia nampitombo ny politikany ary nitondra azy tany Indonezia tamin'ny taon-dasa.
Ankehitriny, ampidirina amin'ny tsingerin'ny asa ihany koa i India ary afaka miditra amin'ity fampiharana ity ny olom-pirenena avy amin'ireo firenena ireo ary mahazo asa. Tsy mamorona asa mihitsy izany, sehatra iray ahafahan’ny orinasa mahita mpiasa, ary mahita asa ny mpiasa.
Ny Kormo App dia tsy mivoatra ho an'ny olona nahita fianarana ihany. Na iza na iza tsy nahita fianarana dia afaka mampihatra reference amin'ny fahaizany. Mahazo App manolotra karazana asa ho an'ny olona samihafa. Io no sehatra tsara indrindra izay manolotra sokajy taonina ho an'ny mpampiasa hampiharina.
Manao CV nomerika ho an'ny mpampiasa ihany koa ny Google Jobs App. Ny mpampiasa dia mila manome fampahalalana marina rehefa manao CV satria mety hiatrika olana amin'ny fanomezana fampahalalana sandoka ianao. Noho izany, manoro hevitra anao izahay hanome ny fampahalalana marina momba anao
Azonao atao ny mahita ity fampiharana ity mahasoa kokoa noho ny hafa. Noho izany, alaivo fotsiny ity fampiharana ity ary manomboka mitady asa. Raha manana olana amin'ny fampiasana Google Kormo Job App ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Hanome anao ny soso-kevitra tsara indrindra araka ny olanao izahay.
anarana Kormo Jobs
Anaran'ny fonosana com.area120.kormo.seeker
Notanisainay ny sasany amin'ireo fiasa ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay hitanao. Noho izany, hizara ny lisitry ny fiasa lehibe izahay rehetra. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana hevitra etsy ambany.
Rafitra CV nomerika
Mahazoa fampandrenesana amin'ny hetsika manan-danja rehetra
Ahoana ny fampidinana ny rakitra Apk
Raha hisintona ny rakitra Korma Apk dia azonao atao ny mitsidika ny Google Play Store na misintona azy amin'ity pejy ity. Ny bokotra fampidinana dia hita eo amin'ny ambony sy ambany amin'ity pejy ity. Mila manindry ny bokotra fampidinana ianao ary miandry segondra vitsy dia hanomboka ho azy ny fampidinana.
Rehefa vita ny fampidinana dia tsy maintsy manao fanovana vitsivitsy amin'ny toe-javatra ianao. Mba hanaovana izany, midira ao amin'ny Settings ny fitaovana Android ary sokafy ny Security tontonana, avy eo Checkmark 'Unknown Source'. Rehefa vita io dingana io dia afaka mametraka ny rakitra Apk ianao.
Kormo Job App no ​​fampiharana tsara indrindra ho an'izay mitady asa. Manolotra asa an-taoniny, izay azonao ampiharina amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fitaovana Android anao. Noho izany, misintona ity fampiharana ity mba hahazoana asa. Ho an'ny fampiharana mahafinaritra kokoa dia tsidiho ny anay Website.
Sokajy Apps, Business Tags Mahazo App, App Google Jobs, Google Kormo Job App, Kormo Job App Post Fikarohana
EZ Month Apk Download ho an'ny Android [ML 2022 Hack]